Bitstake စျေး - အွန်လိုင်း XBS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Bitstake (XBS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Bitstake (XBS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Bitstake ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Bitstake တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Bitstake များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitstakeXBS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$2.48BitstakeXBS သို့ ယူရိုEUR€2.06BitstakeXBS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.79BitstakeXBS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.2.27BitstakeXBS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr20.65BitstakeXBS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.15.33BitstakeXBS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč53.3BitstakeXBS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł9.39BitstakeXBS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$3.1BitstakeXBS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$3.2BitstakeXBS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$49.51BitstakeXBS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$19.26BitstakeXBS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$13.82BitstakeXBS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹186.05BitstakeXBS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.380.38BitstakeXBS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$3.3BitstakeXBS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$3.46BitstakeXBS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿77.79BitstakeXBS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥16.11BitstakeXBS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥268.23BitstakeXBS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2774.63BitstakeXBS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦946.26BitstakeXBS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽189.16BitstakeXBS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴69.52
BitstakeXBS သို့ BitcoinBTC0.00004 BitstakeXBS သို့ EthereumETH0.00124 BitstakeXBS သို့ LitecoinLTC0.0111 BitstakeXBS သို့ DigitalCashDASH0.00958 BitstakeXBS သို့ MoneroXMR0.00941 BitstakeXBS သို့ NxtNXT40.75 BitstakeXBS သို့ Ethereum ClassicETC0.129 BitstakeXBS သို့ DogecoinDOGE41.28 BitstakeXBS သို့ ZCashZEC0.0143 BitstakeXBS သို့ BitsharesBTS21.59 BitstakeXBS သို့ DigiByteDGB31.03 BitstakeXBS သို့ RippleXRP2.65 BitstakeXBS သို့ BitcoinDarkBTCD8208700.27 BitstakeXBS သို့ PeerCoinPPC2.54 BitstakeXBS သို့ CraigsCoinCRAIG108528954553.17
BitstakeXBS သို့ PayCoinXPY992.8 BitstakeXBS သို့ ProsperCoinPRC248200546.04 BitstakeXBS သို့ YbCoinYBC0.00138 BitstakeXBS သို့ DarkKushDANK76372227278.16 BitstakeXBS သို့ GiveCoinGIVE515512534127.58 BitstakeXBS သို့ KoboCoinKOBO191.16 BitstakeXBS သို့ DarkTokenDT2.29 BitstakeXBS သို့ CETUS CoinCETI34367502275.18
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 22 Apr 2021 10:40:02 +0000.